Koby Pitch Cannabis - Drafitra manokana hampiakarana renivohitra
Raiso ny deck anao
Mifantoha amin'ny pejy 15 fotsiny ny orinasanao ary atsangano ny rafitry ny zavatra hataonao amin'ny renivohitra amin'ny fampiroboroboana ny fahaizanao.
Manantona matihanina rongony roa rehefa mijery ny latabatra avo lenta avy amin'ny MSO izy ireo ary manampy anao hamaky ny tenanao ho lasa tokotanin-tseranana azonao ampiasaina amin'ny ezaka ataonao.
Ny fonosana Cannabis Pitch Deck dia misy:
Fanazavana feno momba ny slide tsirairay
Noforonin'ireo manam-pahaizana momba ny lohahevitra ara-dalàna sy ara-bola amin'ny sehatry ny rongony.
Dingana feno sy azo zakaina
Ora atiny manazava ny fomba hanamboarana ny tokotanin'ny vala ho an'ny ekipanao
3 ora an'ny An'i Josh Kincaid's fotoana
3 ora an'ny Tom Howard's fotoana
Kianja avoavo namboarina ho an'ny ekipanao afaka herinandro vitsivitsy.
Ho an'ny fanampiny $99, afaka manome famolavolana logo manokana ihany koa izahay. Rehefa vita izany ianao dia tsy hanana ny anjaranao manokana fotsiny ianao - fa hahatakatra koa izay tadiavin'ireo mpampiasa vola, inona ny vidiny sy ny fandrika mety hitranga aminao, ary ny tena zava-dehibe dia ny fomba hahazoanao ny volanao.
Mpanadihady Capital Cannabis
Josh Kincaid dia niasa tamin'ny vola nandritra ny taona maro talohan'ny nitodihany manokana tamin'ny indostrian'ny rongony.
Ny Cannabis Pitch Deck Workflow anao
Vidio ny fonosana
Lohahevitra manandanja Ireo manam-pahaizana momba ny indostrian'ny rongony dia mitarika anao amin'ny famerenana ireo latabatra MSO
Ataovy miavaka ny tsipika tsirairay amin'ny tokotanin'ny ekipanao
Tom & Josh dia mipetrapetraka miaraka amin'ny ekipanao tsirairay handefa ny tokotanin-tsambo.
Mahazo $ 250 amin'ny vokatra indostrialy rongony hafa ianao, toa ny fonosan'ny Business Plan Services anay, na ny Fundraising Suite anay.
Manomboka amin'ny fandinihana izahay, ary manome ny famerenanao, ireo birao tena misy avy amin'ny MSO toa ny MedMen, Harvest, Trulive, Acerage, sns.
Hitroka lalina ianao amin'ny fomban'ny mpandraharaha ankehitriny mitady vola ho an'ny renivohitra.
Genetika eo an-toerana na LoGen raha fintinina dia fanombohana rongony mahery vaika hipotetika. Fantatra ve?
Startk Pitch Deck dia tsy zavatra tian'ny rehetra atao, fa na ny MSO aza dia tsy maintsy manangona vola foana hahazoana izany fahazoan-dàlana manaraka izany - na manangana azy io aorian'ny nahazoany antoka azy io.
Aiza ianao no miasa Manampy anao izahay hizaha ny fanjakanao sy ny lalàny ary inona ny fahafaha-manararaotra ny tsena amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo zavatra vita an-tsoratra momba ny indostrian'ny Marijuana Business Daily.
Mahazo ny volamena ny ekipa - izay anananao eo amin'ny dabilio no mahasarika anao. mpanararaotra tsena sy voafetra.
Izay fantatrao fa manan-danja - ny rongony dia indostria lafo vidy indrindra na dia misokatra aza ny tsena ho an'ireo manana fahazoan-dàlana vaovao.
Ny takelaka fanaovana pirinty dia ampiasaina miaraka amina drafitra fandraharahana sy vinavina ara-bola.
Vokatr'izany, ny pitch dia tokony ho voafetra amin'ny fampahalalana tena manan-danja indrindra amin'ny sary miisa 10-15 fotsiny - fampisehoana 10 minitra, 20 minitra amin'ny ankamaroan'ny.
Ireto fizarana manaraka ireto dia tokony hodinihina (isaky ny slide):
Asehoy ny sary famantarana anao, ny anaran'ny orinasa
Ampidiro ny anaran'ny mpanolotra, ny anaram-bondrona ary ny mombamomba ny fifandraisana
Ampidiro ny sarin'ny vokatrao sy ny tolotra serivisinao (raha manana ianao)
Farito amin'ny fomba tsotra sy mazava ny olana tadiavinao
Azavao ny antony mahatonga ny vokatrao hanaisotra ny olan'ny mpanjifa. Mampiasà ohatra.
Ny fanjakana ankehitriny, fahasarotan'ny olana
Firenena ho avy irina, tombony ho an'ny mpanjifa
Scale an'ny tsena voalohany
Firy ny mpanjifa mety manamarina ny olana?
Lazalazao amin'ny vahaolana tsotra sy mazava ary fohy ny vahaolanao
Tombony lehibe, fampiasa ho an'ny mpanjifa
Modely famolavolana vokatra
Fotoam-pivoarana na famolavolana
Mariho fa tsy tokony ho teknolojia "majika" na zavatra tsy ara-dalàna izany
Inona no aloan'ny mpanjifa amin'ny vahaolana?
Azavao amin'ny fomba mazava sy fohy ny fomba hahazoanao vola
Fantaro eto ny tanjon'ny drafitry ny orinasa, raha mbola tsy vitanao izany, anisan'izany ny:
Azo ampiasaina indray
Inona ny sandan'ny mpanjifa?
Tadidio fa te hahafantatra ilay mpampiasa vola fa azonao tsara fa momba ny mpanjifa daholo izany!
Tokony hasehonao fa ny tsena kendrena dia ampy hanohanana orinasa iray ahazoana tombony, sady manasongadina ny lanjan'ilay vahaolana.
Inona ny haben'ny tsena sy ny mety ho fitomboan'ny vina?
Iza no mpanjifa kendrenao?
Inona ny toeran'ny vokatrao ao anatin'ny tsena?
Misy fironana amin'ny tsena araraotinao ve? Ity no valiny hoe "Fa maninona izao?"
Inona avy ireo fampiharana hafa mety ho an'ny vokatrao?
Ahoana no hahatratraranao ny mpanjifanao?
Ifanakalozy hevitra ny paikady marketing 1 na 2
Hafiriana ny fihodinan'ny varotra sy ny paikady ho an'ny tsena voalohany?
Ahoana no hahazoanao ny mpanjifanao voalohany?
Manana vola laniana ve izy ireo?
Ahoana no hampivelaranao ny vokatra / serivisy?
Vola hivelarana sy hamokarana
Vidiny azo amidy amin'ny mpanjifanao
Fanadihadiana momba ny vidin'ny fifaninanana
Fikajiana ny vidiny / margana
Ny fanombohana rehetra dia misy ny fifaninanana, fa tsy ny fanisana lisitra ny mpifaninana dia saina mena.
Misy hatrany ny fifaninanana
Raha tsy misy dia mety tsy misy tsena
Iza no eny an-tsena ary ahoana no mampitaha azy ireo?
Inona no maha samy hafa ny vokatra, ny endri-javatra ary ny vidiny
Omeo fanadihadihana fifaninanana
Mety ho latabatra / tabilao mampitaha ny vahaolana amin'ny fomba ankehitriny sy ny mpifaninana lehibe
Ny fampitahana dia miankina amin'ny tombony lehibe
Mariho fa arakaraky ny maha-zava-misy anao dia vao mainka azo inoana ny tranga misy anao
Tanisao daholo ny mpikambana ao amin'ny ekipa
Inona avy ireo fahaiza-manao, loharano, traikefa, na fahalalana UNIQUE entin'izy ireo ao amin'ny ekipa?
Ampidiro ny mpanorina, ny fitantanana fototra ary ny Board of Advisors
Fa maninona ianao no ekipa mety handresy (firaketana ny fahombiazana)?
Ampidiro ny fiaraha-miasa ary na dia ireo mpamatsy tolotra matihanina efa tafiditra toa ny mpisolovava, CPA, sns.
Inona avy ireo toerana tadiavinao?
Ny ankamaroan'ny mpampiasa vola dia mahalala fa ny jockey (ekipa) no filokana fa tsy ny soavaly (hevitra momba ny asa) ka ataovy misy vokany io slide io
Tsy ny orinasa rehetra dia misy fiatraikany ara-tsosialy, fa mety hanampy ny mitondra iray raha manana ianao. Fanjakana maro no manana singa "fitoviana ara-tsosialy" ary tokony hiresaka izany amin'ny anjaranao ianao. Ho fanampin'izay, matetika izahay no milaza ao amin'ny Cannabis Legalization News & the Talking Hedge - jereo ireto podcast roa ireto - fa "ny rongony rehetra dia eo an-toerana" ka ny tombony ho an'ny vondrom-piarahamoninao dia tokony ho ao anatin'ny drafitra kasainao.
Manana ekipa maro karazana sy ekipa ve ianao?
Inona no fiantraikan'ny vokatrao na serivisinao amin'ny tontolo iainana?
Hisy fiatraikany ara-tsosialy tsara ve ny sainao?
Lazalazao ny soatoavin'ny orinasanao
Moa ve izany fiovana lehibe hahasoa ny tsena?
Inona no majika azo antoka sy miafina izay manome ny valin'ny ekipanao tombony mazava sy azo iarovana?
Fanatsarana endrika mihoatra ny tolotra ankehitriny
Inona no hataonao manokana fa sarotra ny maka tahaka azy?
Manana patanty ve ianao?
Afatory tsara sy milamina ny fampisehoana
Inona avy ireo dingana manaraka amin'ny maha orinasa anao?
Inona avy ireo fampahalalana ilainao handrosoana?
Miomàna amin'ny fanontaniana hafa
Aza adino ny mampiditra antso ho amin'ny hetsika
Raiso amin'ny Cannabiz ny ambaratonga manaraka
Sarintany fanamarinana marijuana
Aza adino ny Map Marijuana Legalization Map ahafahanao mizaha ny satan'ny lalàna any amin'ny fanjakana any Etazonia ka mahita ny lahatsoratray rehetra amin'izy ireo.